Cryptocurrency Exchange BitGrail inozivisa insolvency pashure Hack - Blockchain News
Mutemo Crypto Market mu 2018
Kukadzi 10, 2018 arun
Cryptocurrency Exchange BitGrail inozivisa insolvency pashure Hack
BitGrail cryptocurrency Exchange akazivisa ivo vave hacked uye ndakadaro withdrawals.
Ivo rinoziviswa insolvency ravo February 8th, 2018.
BitGrail anonzi akarasika 17,000,000 XRB ari 'kunze komutemo kutapurirana kurasikirwa’ aka Hack.
Bitgrail S.r.l anoudza vanoshandisa ayo kuti kunze komutemo kwema kunge yakabuda munyika macheki pamusoro adequacy pamusoro kushaya remapazi zvakatungamirira vanodzishayiwa pakati N. 17 Mln Nano c.a. chikamu nemigove mumabhizimisi neKomisheni Bitgrail S.r.l.
Nokuti enhema basa akataura pamusoro, nguva ano chichemo chichemo akanga kudare pamwe nomazvo Mapurisa uye mapurisa kuferefeta zviri kuitwa.
Tapota ona kuti vamwe dzeEurope rakachengetedzwa vasina kukanganiswa kunze komutemo withdrawals.
Kuti aite mimwe macheki chii chakaitika, somunhu matanho chipimo uye kudzivirira vanoshandisa, vose functionalities kwenzvimbo, kusanganisira withdrawals uye deposits, chichaitwa kwenguva yakaturikwa.
Tovapa yedu sincerest ruregero kuti vatengi vedu uye vanobatanidzwa mune zvisiri pamutemo kuchinjwa Nano ari pachikuva yedu.
Uyezve wokudhinda zvabudiswa munguva pfupi ichatevera.
Tinotenda kuti kuteerera.
Intel mafaira bvumidzwa nokuda Bitcoin mugodhi Hardware akisarareta
Tech Zirume Intel ndiye ...
Previous Post:Japanese crypto vanoita aigona utarisane 55% mutero pamusoro Purofiti
Next Post:50 Dubai Condos akapa kutengeswa muna Bitcoin zvose vakatengwa
Sei munhu kufanotaura maitiro mwero mumwe cryptocurrency tichitarisa uwandu mirairo akaisa?
Thailand National Stock Exchange chinonyengera blockchain mari musika
Chivabvu 17, 2018 arun
Chii hunhu muitiro kutenga kana kutengesa munhu
Chivabvu 13, 2018 arun
Popularity cryptocurrencies, kwasvika chikero dzakadaro, kuti chete chaizvo simbe kana chaizvo
bitcoin ne misa cheni BTC gore kuchera vaiona Coinbase crypto cryptocurrencies cryptocurrency ethereum Exchange hardfork ico litecoin Ma mucheri kuchera kwete samambure itsva nhau dandara dzakati ripple vakatevera teregiramu chiratidzo zviratidzo wokutengesera chikwama